ICanada iphehlelela isiqinisekiso esitsha sokuhamba sokugonya se-COVID-19
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba » ICanada iphehlelela isiqinisekiso esitsha sokuhamba sokugonya se-COVID-19
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
ICanada iphehlelela isiqinisekiso esitsha sokuhamba sokugonya se-COVID-19.
Uxwebhu olutsha lwaseCanada lokuhamba ngokwedijithali luya kuba nekhowudi ye-QR yokuskena kwizikhululo zeenqwelo moya, kwizikhululo zikaloliwe nakwezinye iindawo zokungena.
Isatifikethi sokugonya siya kuba nenqaku lokuchonga laseCanada kwaye lihlangabeze imigangatho yamakhadi ezempilo kwilizwe liphela.
Olu xwebhu luza kubandakanya igama lomntu, umhla wokuzalwa kunye nembali yokugonya ye-COVID-19- kubandakanya ukuba yeyiphi imithamo umntu ayifumeneyo kunye nokuba ebegonyiwe nini.
Abantu baseKhanada abayi kukwazi ukukhwela inqwelomoya kuhambo lwangaphandle okanye lwasekhaya ngaphandle kwesiqinisekiso sokugonya ukuqala nge-30 kaNovemba.
ECanada Inkulumbuso uJustin Trudeau ibhengezwe namhlanje ukuba isiqinisekiso esitsha sokuhamba esisemgangathweni se-COVID-19 siyasungulwa ngurhulumente welizwe.
"Njengoko abantu baseCanada bejonge ukuqala ukuhamba kwakhona, kuya kubakho isiqinisekiso esisemgangathweni sokugonya," Trudeau watsho, ebongoza abantu baseCanada abangenzanga njalo ukuba bagonywe ngokukhawuleza. "Singawuphelisa lo bhubhani kwaye sibuyele kwizinto esizithandayo."
Urhulumente kazwelonke uya kuhlawula ngokukhupha ipaspoti yokugonya esemgangathweni, Trudeau utshilo. "Siza kuthatha ithebhu."
In Khanada, ukhathalelo lwezempilo lunikezelwa kakhulu ngoorhulumente bamaphondo kwaye ubukhulu becala buxhaswa ngemali ngurhulumente kazwelonke, ngamanye amaxesha okukhokelela kwiingxabano zezopolitiko malunga nolawulo kunye nokuba ngubani ohlawulayo.
Amanye amaphondo, kuquka iSaskatchewan, i-Ontario, iQuebec, iNova Scotia, iNewfoundland kunye neLabrador kunye nemimandla emithathu esemantla, sele iqalisile ukusebenzisa umgangatho wesizwe wesiqinisekiso sokugonywa, utshilo uTrudeau.
Uxwebhu olutsha lokuhamba lwedijithali, olubizwa ngokuba yiPasipoti yokuGonya, luya kuba nekhowudi ye-QR yokuskena kwizikhululo zeenqwelo moya, kwizikhululo zikaloliwe nakwezinye iindawo zokungena.
Novemba 29, 2021 kwi-06: 11
Siyazi, iCanada isungula ipaspoti yokugonya esemgangathweni ye-COVID-19 ukwenza kube lula kubemi ukuba bahambe phesheya, iNkulumbuso uJustin Trudeau ubhengeze. Uxwebhu lwedijithali olutyhilwe ngoLwesine luya kuba nekhowudi ye-QR yokuskena kwizikhululo zeenqwelomoya, izikhululo zikaloliwe kunye nezinye iindawo zokungena. Njengoko iimfuneko zogonyo ezitsha zisiwa kubahambi, sisebenzela ukuqinisekisa ukuba abo bahambayo bayafikelela kwindawo ethembekileyo.